शुक्रवारबाट सिनेमा हल खुल्ने,‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ फेरी हलमा लाग्ने - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म शुक्रवारबाट सिनेमा हल खुल्ने,‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ फेरी हलमा लाग्ने
शुक्रवारबाट सिनेमा हल खुल्ने,‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ फेरी हलमा लाग्ने
सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई वेवास्था गरेको भन्दै गएको हप्ता नेपाल चलचित्र संघले पुष १० गतेबाट सिनेमा हल खोल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सिनेमा हल खोल्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरे पनि हल व्यवसायीहरु शुक्रवारबाट सिनेमा हल खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । प्रदर्शनको क्रममा रोकिएका दुई नेपाली चलचित्र ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ शुक्रवारबाट पुनः प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले बताएका छन् । यी दुवै चलचित्र हलमा रिलिज भैरहेको समयमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएको थियो । मल्टीप्लेक्समा भने यी दुई नेपाली चलचित्रसँगै हलिउड चलचित्र ‘मुलान’ र ‘ब्लडसट’ प्रदर्शन हुँदैछन् ।
सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई बेवास्था गरेको भन्दै गएको हप्ता नेपाल चलचित्र संघले पुष १० गतेबाट सिनेमा हल खोल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सिनेमा हल खोल्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरे पनि हल व्यवसायीहरु शुक्रवारबाट सिनेमा हल खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । प्रदर्शनको क्रममा रोकिएका दुई नेपाली चलचित्र ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ शुक्रवारबाट पुनः प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले बताएका छन् । यी दुवै चलचित्र हलमा रिलिज भैरहेको समयमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएको थियो । मल्टीप्लेक्समा भने यी दुई नेपाली चलचित्रसँगै हलिउड चलचित्र ‘मुलान’ र ‘ब्लडसट’ प्रदर्शन हुँदैछन् ।
समिक्षात्मक र व्यवसायिक दुवै रुपमा सफल रहेको ‘आमा’ लाई दीपेन्द्र के. खनालले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा सुरक्षा पन्त र मिथिला शर्माको मुख्य भूमिका छ । त्यस्तै, रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ मा सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, दयाहाङ राई, सन्दिप क्षेत्रीलगायतको अभिनय छ ।
Previous articleअब नेकपा कसको, ओली समूह कि प्रचण्ड-नेपाल ?
Next articleअञ्जु पन्तको आवाजमा राम पियारि म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
TLN Post - August 21, 2021 0
कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रममा चलचित्र पनि पढाइ हुने भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सेलेबस पठाइसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया...
TLN Post - May 31, 2021 0
चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’को गीत ‘कुटुमा कुटु’ले युट्युबमा १५ करोड भ्युज पाएको छ । हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको गीतले नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै...
TLN Post - May 25, 2021 0
नेटफ्लििक्सको बहु चर्चित सिरिज ‘मनी हेइस्ट’को अन्तिम सिजन दुई भागमा आउने भएको छ । सोमबार साँझ टिजर सार्वजनिक गर्दै नेटफ्लििक्सले अन्तिम भाग दुई भोल्युममा...
सन्दीप लामिछानेले इङ्गल्याण्डको भाइटालिटी ब्लास्ट क्रिकेट खेल्न नपाउने